Kusinda kwehlela kuZahara obhekwe yisambane
UZAHARA uthi ngeke alunqabe usizo kubantu abafisa ukungenelela bamsize ezinkingeni ezimkhungethe kodwa akathandi ukwenziwa inhlekisa Isithombe: INSTAGRAM
UKHALA ngokungahlonishwa kwesithunzi sakhe umculi olandelwa ngamabhadi okubalwa nesigameko sakamuva, sokwebelwa izindondo azihlomule emculweni.
UZahara ukhala ngokuthi kuzona zonke izinkinga ezimkhungethe, kukhona esebethole intuba yokumphendula inhlekisa. Lokhu kwenzeka ngemva kokuthi abalandeli ezinkundleni zokuxhumana, bephakamise ukuthi asizwe ukuze abhekane nezindleko ngoba wake wadalula ukuthi kunezimali angakaze akhokhelwe zona.
"Anginayo inkinga kwabathanda ukusiza, bangangisiza nanoma ngabe yingaluphi usizo. Ayikho into engiyifihlayo ngempilo yami. Kulesi simo engikusona kukhona abanesandla, awusadlalwa umculo wami. Uma kwenzekile wadlalwa kwenziwa ebusuku abantu sebelele, nabezindaba babhaliswa ngezinto ezingelona iqiniso besebenzisa imithombo engekho. Ngingumuntu kuyezwela. Nginomndeni okungemnandi nakuwona," kusho uZahara.
Eqhuba uZahara ukhale ngokuthi selokhu angena emculweni sincane isikhathi asijabulelayo ngenxa yezinkinga eziphathelene nawo. Noma kubukeka esephumelele edumile kodwa ukhala ngokuthi kuncane akuzuzile ngemva kwezinsolo eziningi ezike zavela zokuxhashazwa kwakhe, yizinkampani zomculo.
"Uma ulwe nenkampani enkulu kule mboni yethu, uvalelwa yonke into ngisho nemicimbi ungabe usayithola kodwa ngiyazama. Kunzima ukuzilwela nenkampani, ngeke uphinde ukuthole ukuthula uvaleleka yonke indawo, neCovid nayo ifike yaqedela nebengikukhokhela bengibona sekwenzeka angazi kanjani," kusho uZahara.
UZahara uthi noma kunjalo kodwa akamile naye ukusiza lapho ekwazi ukufinyelela khona. Noma engenayo imali kodwa uhamba engqongqoza ezitolo acele usizo lwezimpahla nezinsiza zokufunda ayonikelela izingane eziswele ezikoleni.
"Ngacela ezitolo izimpahla zokunikelela izingane ezikoleni nezicathulo. Namhlanje bengihambise zona ngezwa izinyembezi zigcwala amehlo. Indlela ebengizibambe bengenzela ukuthi ngijabulise abantwana kudlule ngibuyele endlini," kusho uZahara.
Ephetha ucele ukuthi baqhubeke nokumkhulekisa adlule kulesi simo abhekene naso ngoba sekungaphezulu kwamandla akhe. Mayelana necala lokuntshontshelwa, uthe kuseyinzukazikeyi ngoba kungakaze kuthathwe ngisho ama-finger print endlini, kanti namakhamera awakaze avulwe kubhekwe abasolwa.